RAB: PART3 – Exclusive Interview with the Chairman of the Oromo Liberation Front (OLF), J/ Daawud Ibsaa | GadaaTube
For users with low Internet speed, follow the video in an audio format; simply press "Play" on the "Listen Now" picture/icon on the right side. Or Click Here.
Tags/Credits: Daawud Ibsaa, Radio Afuura Biyyaa
Radio Afuura Biyyaa: Interview with Obbo Denebo Dekeba on the Gadaa System’s Institutions for Social Protection and Societal Development
Radio Afuura Biyyaa: Exclusive Interview with Dr. Ibrahim Amea Elemo on the 40th Legislative Assembly of Gumii Gaayyoo
Part II: Interview with Former Chairman of OLF, J/ Galaasaa Dilboo – RAB
News in Afan Oromo and Amharic – Radio Afuura Biyyaa – April 24, 2012 – Part 2
Radio Afuura Biyyaa: Interview with Rev. Dr. Tasgara Hirpo
Credits/Tags: Daawud Ibsaa, Radio Afuura Biyyaa
26 Responses to "RAB: PART3 – Exclusive Interview with the Chairman of the Oromo Liberation Front (OLF), J/ Daawud Ibsaa"
wabii June 28, 2012 at 6:21 pm
Hayyuu duree keenyaa umurii dheeraa issiniifan hawwa. Waqayyoo inni waan hudumaa gochuu danda’u bilisummaa saba fi dachee keenyaa dabarsee nuuf haa kennun jedha. J/ Daawud jiraadhu, gallani kee bilisumma kayyoo qabatee jirtuu siif haa ta’u. Ni jabaanna, dhugaan ni qalatti malee hin cittu jedha mitii oromoon yeroo makmaaku. haqa qabna, haqaaf falmanna, haqaaf duuna, siida haqaas haadhuuraa biyya keenya finfineeti ni dhabbana.
Baabboo June 28, 2012 at 11:13 pm
So, it’s finally over sir ! Although it has been coming for a long time, really. What you are doing this time around is just a full stop. A decades of mismanagement and mishandeling of issues by your highness sees Qabsoo bilisummaa Oromoo on its knees. And there is the real prospect that we may never recover from your evil doing and mischief. You are a cause or source of harm , evil and damage among the oromo’s. You are THE MOST DIVISIVE PERSON on earth !
So what is next Mr Frew ? What kind of evil plan do you have in store for us ? Aangoof osouma bololtuu duutee baduu jirta. Gooftaan kee Isaayyaas guyyaa tokko morma si irraa muree garuun isaa hin oolu. Maaluma sii godha aangoon tun ? Hedduu mi’ootii mii ? Magan siif !
Girma June 29, 2012 at 12:32 am
This is the worst Radio station I ever come across. It sound like a propaganda tool for Daud Ibsa. The guy has no clue about journalism. He should asked tough question, about its performance and its relationship with other Oromo organizations.
Oromsiis June 29, 2012 at 4:43 am
Si jaaladha j/Daawud garuu komiin koo maaliif warroota qoqqoodaman kan akka Leencootiin walii galuu dhabdan! Isin lachanuu isin jaaladha nuuf jiraadhaa!
Rorro June 29, 2012 at 7:03 am
Dawit ebisa unproduce leader, under his leadership our strugle went backward. Oromo people had divided in deap cricess, olf sinked in the hand of our enemy, what bad chance for my people. Dawit you will go down as worse main kind in our socity.
Booree June 29, 2012 at 9:27 am
Gaafiif deebi kana gochuukeef galatoomi.
Yaa Ilmaan oromoo Ani gaafii jabduu tokkon qaba?!!!!!
Amma yoomitti carraan ilmaan oromoo namoota “gaggeesitoota” ofiin jedhan garuu dandeetti/ogumaa/ga’umsaa gaggeesumaa hin qabneen murtaawa?!
haga yoomitti teenyee waan haga jarri kun lubbuun dabranii ykn haala biroon haga isaan aangoo gadhiisanitti eegna?!! ilmaan oromoo biyya keessatti ibidda gabrummaan waadamaa jiran, mana hidhaatti, biyya baqaatti, mirgaa fi jireenya sarbamanii yeroo dararaman kanatti, Gaggeessitoonni akka obbo Daud Ibsaa haga yoomitti deemsa qabsoo uummata kanaa fulduratti adeemsisuu dadhabuun gufachiisu?!..
Obbop Daud, akka nama dhunfaa tokkootti kabaja olaanaa nama argachuu qabu tokko. akka ilaalcha kiyyatti haat’u malee bakki inni irra jiru dandeetti/ga’umsa siyaasaa fi gaggeessummaa olaanaa barbaada.
kanaaf yoo ilmaan Oromoof yaade aangoo kana namoota biroo keessumaayyu Dargaggoota oromoof dabarsuu qaba!
Dambii June 29, 2012 at 10:11 am
Namichii kun yaada isa gabaabsee dubachuu hin dada’u? Of the 40 million Oromoo people, this is our leader? No wonder why we couldn’t get any where!
This guy need to go!
Booree June 29, 2012 at 10:16 am
Don’t we diserve a better leader?!
Bakki Obbo daud jiran kun dhugaatti dandeettii, itgaafatumma gaggessumaa fi wareegama guddaa kan barbaadu dha. Akka ilaalcha kiyyaatti Obbo Dauds ta’ee kan biroon gaggsitoota ofiin jedhan ga’umsa kana hin qaban. kana waggoota darban 10-15 arginee jirra>
yoo fulduratti deemuuf ta’e jijjiramni murteessaadha.
waqo June 29, 2012 at 10:36 am
Girma kan offinin jetuu waa balaaqamuu kee duraa xinxali gamaagami ilaali RAB jaiqaaba kase hangaa amati wanshen nuu dhesaati jirtuu maxxansa baraa kanaa kesaati isaa jaliqaabaa yoon jedhee itxiqatu .sabontota qopesitaota Radio Afuurr Biyyaa jabadha jiruu sin ojecha jirtan oromofi ijaa fi guraa waan tatanfi waraa akk Girma waaynotaafimo abiidaa ramacidhaa .yaa wayaane siraati barameraa./ uquubee nyaatamedhaa/ sichii ijiruu . namoni RAB ojeetani yoo inbeetu tee waara seifnebelibali gazexxaa biyyaa kesati ojechaa turaanife waraa gazeexa kana undesanidha /ISERAEL SOBOKA/ fadhaa.waar RAB jabaadha isni waali jiraa hayuu oromo sagaale saani dhabinee asi basudhaani nu dhagesisuu kesanfii gaalata gudaa qabiduu. isreal jabadhuu shiiraa maxaanisaa kee seifenebelibal irrati tae ubaneera omaa miti haraalee kuno RAB maqsaafi jiruunsaa wli fakaata bayee isnit bonaa .hayyota oromo undumaafi galaata gudaani qaabaa jabaadhaa qabsso keenya finsinaa siiyaani wayaneen dulomeraati. walit qubaa qabu dhisiine amma dandenyu bilsumaa sabaa oromofi haojenuu galaatoma
Furata Alemayehu June 29, 2012 at 12:51 pm
Warreen yaada armaa’otitti kennan gariin yaada eenyummaa fi gahummaa miira isaanii gabaabaatti kan nama xiinxalchiisuu danda’u kan ibsatan waan ta’eef baa’iyee itti hin gaddu.
Hunda dura Qabsoo fi kaayoon maal akka ta’an adda baasaa beekaa.Itti aansaatii kaayoo akeekichaatti amanaa.Achi irratti hundaayaatii akka qaama sabichaatti dirqama umrii,dandeettii fi bakka jirtan irratti hundooftanii dirqama bahuu qabdan bahadhaa.
Kan kana irraa hafe hayyudureen isin irraa gadee waamtan kun kaayoo fi akeeka qabsichaa irratti hundaayee kan dhaabichatti cichee dhabamiinsa irraa baraaredha.Kanaaf ijaa fi qabeenya Saba Oromooti.
Jireenya inni jiraachaa QBO Oromoo jiraachisaa jiru kana isin warri akkafeetan afaan bantan otoo bakka isaa taatanii guyyaa tokko akka hin oollee fi Qabsichallee hin oolchine namuu akkaataa keessan irraa hubachuu danda’a.Isin warra ammayyuu QBS hin galleefii nama ilaaltanii deeggertanii fi namaaf jecha balaaleffatanidha.Kanaaf isin meeshaadha,ayyaan laallattoota.
Gantoonni QBO immoo yeroo fi kallattii adda-addaan heeraa fi seera QBO irra ejjetanii bahuun gartuus ta’e dhaaba bixxilatan qabsaahota SO otoo hin taan qabsaahota dhuunfaa mataa isaanii gantootakaayooti.Akkasitti akka hubattanan bar-baada.Nagaatti ana
Booree June 29, 2012 at 2:14 pm
rakkoon jirtu as bira. nuti jaalala ykn dhimma nama dhuunfatti hin jirru. Obbo Dau’d akka dhuunfatti gumaachanni QBO godhe hedduu isa kabaajichiisa. haata’u malee garuu Gageessaa QBO(uumata millionaan lakkawaamu) ta’uun dandeetti /wareegama/jabeenya….kan obbo Daud qabu ol barbaada!…
cheeraaf seera eeganii eegsissun, cichanii dhaaba eeguun hedduu bareedaa dha. haat’u malee Qabsoo kana hogganuun sani ol gaafata. hadhaa jirtu liqimsuun namoota akka dhuunfattille walii hingalle/hin jallanne waliin dalaguu, dantaa uumataaf jecha “ego” ofii dhiisuu, egeree ummata keenyaa tolchuuf jacha “champion” jijjiramaa ta’uun barbbachisaa dha. ABO jedhee qaama of waamu kan biroo waliin dubbatanii/maari’atanii dubbii hikuu erga hin dandeenye(inumayyuu jechoota “dhaabni adda addaa jiraachuun badii miti” jedhaan nu dhageessisuun sadargaa gageessummaa Oromoon hara barbaadu miti!
at any cost Tokkumaa qabsaaota Oromoo deebisuuf halkaanii guyyaa kan dalagu, fayidaan yeroo fi dynamics siyasaa kan galuuf, haala yeroo fi qilleensa waliin qabsoo kana oofuu kan danda’u…
abjuu dhaan qabsoo gaggeessuu otuu hin tane dhugaatti qabsoo gaggeessuu kan danda’u …
yeroo gaariis yeroo hamaas gorsaa fi yaada ummatasaa fuchuuf qophii kan ta’e..
dhugaa jiru/badii jiru qulqullumaan uumataasaaf kan himu fi ceephoo fudhachuuf kan qophawee,
socho’ee uummata sochoosuu kan danda’u ta’uu qaba…
Akkanumatti ta’anii bara dhufee darbee akka isa maraatee waanuma tokko irra deddebi’anii dubbachuun.. injifannoo isaanii fi jaleesanitti malee oromoo biraatti kan hin mula’annee…kufaatii QBO keessa jiru arguu kan hin dandeenye… garee xiqoo walitti qabuun ololanii ololchiisuun gaggeesumaa ta’uu hin danda’u!
gaggeessummaan akkasii amata 100 yoo lolameelle wareegama malee injifannoo fiduuf hin danda’u!
Jaboo June 29, 2012 at 6:05 pm
Waan gadhee warri barreessitan kan akka Booree, Dambii,fi warri isaan fakkaatan qabsoon Bunaafi shayii dhuganii hudduu habashaa arraabuu mitii. Dadhabbiifi umurii akkasumas lubbuu gaafata waan ta’eef
Getachew June 29, 2012 at 7:16 pm
Daod and his morbid SHANE guys have sabotaged the legitimate power and actions of GUMII SABAA. Daod shamelessly says, if there is a problem in OLF, the normal procedure is to address it to GUMII SABAA. But he made sure the GUMII SABAA will never convene. Why is Doad still on power? Is there no able Oromo among the 40 million Oromos to take over and lead our liberation struggle?
Yaa boo , angoon Malasatti miyoofte sittis miyaawaa jirtii, maaliif mallasaa komatta?
Abdi Deqeeno June 29, 2012 at 7:33 pm
“Gageessaa QBO(uumata millionaan lakkawaamu) ta’uun dandeetti /wareegama/jabeenya….kan obbo Daud qabu ol barbaada!” jettee barreesite. Nama ati yaadaa keessa qabdu sana bikka kamitti arganna? Ati nam sana yoo taate maaliif nu hoggantee bilisummaa keenya hin argamsiiftu? Bari Obbo Dawud bikka jiru sana kan gayee qabsaawootuma akka isaatiin filatamee akka ta’e maaf daggatte? Dandeetti baantuun sana qabda yoo taate, qabsootti dabalamtee maaf filatamuu hin yaalin? “Talk is cheap” akkuma jedhamu sana atis dandeettiin kee kan afaanii kee bira hin darbine taatee argamti.
Rorro June 29, 2012 at 10:22 pm
Maqamaa kelle gandaa irraa achii qabduu, hi goowa sii dubban bowaa.
Lammii June 30, 2012 at 1:55 am
Galata argadhu !!! Oduu fi hojiin waa lama. Namooti obbo Daawudiin komatan maaliif ofii bakka bu’anii hin hojjenne??? Ofii maal hojjechaa jirra jennee of-gaafannaa laata?????
I am not saying obbo Dawud is mistake-proof. What I am trying to say is he is doing something which the comment posters on here wouldn’t dare to do.
Booree June 30, 2012 at 12:06 pm
Daud Ibsaa Qabsaaota akkasaan filatamee hogganaa jira jettee?! ..what a shame?!… jechi akkanaa kun Qabsaaota jiran mara irra Obbo daud waan caaluuf nugaggeessa jira jechuu dha!. Shame on u guys!
kan innio filatamee hara’a ganne 10 ol taeera. nami yeroo inni filame ganna 20 hara’a qabsoo kana akka gaariitti gaggessuu danda.
Yoo dhugaa Qabsoo Oromoo jabeessuu diina hinjifachu moora oromoo itichuu fedhii qabdan ta’e ilaalcha gartumma/gareen yaaduu keessaa ba’uuti Oromoon aqkkamiin humna saa walitti deebfatuun gaggeessa cimaa filachuu dandaa’a kan jedhu irratti xiyyeefadhaa…
Nami gaafii yoo gaafatu gaafiisana deebisanii namuma gaafaatetti deebisuun tooftaa dadhabaa/dullomaa fi kan hududdubatti hafe. Qbsoon oromoo gaggeessa cimaa barbaaddi kan jedhu marti dirma gaggeesaa ta’uu hin qabu…
ganna 10-15 akkanuma dadhabinaa hogganaa fi jal deemtoota hogganaa dhaaba kanaan uumata Orommoo irra badii guddaan ga’eera ammallee ga’aa jira….
Ani akka Oromootti malee akka Gareetti yaaduu hin danda’u.. olola keessan dadhabannE
soolan July 1, 2012 at 6:34 am
Jarana, haasaan gubbana gadi nammu kuni akka duula wayi fakkaachu hin olle.
Dadhabbin QBO keessaa dhibame hin beeku. Ifaanisi dhokssaanisi mullatadhuma ture, ammas ballate jira. Dadhabina sana kan hikkachu dadhamnnefi sababa adda addaan yoo ta’elle, kuno amma akka ilaalaa jirru kana ijoo dadhabbi keenya sirriitti ilaalle yeroon hiiki isaa yoo kana ta’ewo jecha wal gaafiifi walii dhugaan deebisuuni dhuma irratti haala ititaa tokko bira akka hin geenyetti wal arrabassu duwwaati yero dabarsine inni kunimmo yammu darbbu waan median ykn nammi tokko bareesse gad dhisu tokko yammu dhufusi akkuma kana arraba duwwaan wal finne atu ammasi hiikaa rakkina ummata hamma sana ga’u keessa jira jenne hundu dubbatu sana bira hin gahin yeron gara biraammo darbba. Maal kuni abaarsa maaliiti jettatini yaaddanifi of gaafattanii beettu?
Kanaa olitti namooti yaada itititaafi barsiisaa ta’ani dhihessan baayyen jiru. Kan yammu ilaalamu dhukuba oromoon amma ofii isaani gargar hiirame gamaaf gamana dhaabachuni wali irratti duulaafi olola oofun wal xiqqessaafi wal diigaa jiruun wajjin kan sirritti wal fakkaatu baayefi harkka caalu ta’a. Sun akka ta’e ta’eyu garu warra Ummata guddaa kana haqaafi dhugaani gegesine hinjifannoon gahuufi tocho’aa jirra jedhanifi waan nami ittiin jedhaa jiru kuni dhugaasi hata’u hololasi hata’u wantti isaan hafe waan tokko duwwaa ta’u isaa hubachun waan irra jiru natti fakkaata.
1. Akka gaafifi deebi isaani irratti cimee gaafataafi himamaa ture harra haalli isaani keessa jirani amma akka jiranitti gargar bahani iddo tokkoyu gahun hafee jiraachufu akka hin dandenye barani hojii isaani isa kana boodaafi dhimma guddaa godhatani kan ka’un irra jiraatu warra kaayon walitti dhihaataniin tokkomma lafarra hin gototamnne dadafiini umuuni, kan jalqabame yoo jiraate itti finiinsuuni warra dhugaadhaani isaan qeeqanisi dhugaa sana itti agarsiisufi wajjin ummata isaanifi hojechuufis ta’e, warra maalifi walitti deebinaa, dubbattu jecha aariin irratti bobba’an fakkaatanisi akka ittu abddi kutatani gochisiisu,
2. Jijirrami gaafatamaa jiru kan karaa lamaan ilaalamu yammu ta’u warri tokko jijirama gudinaafi jabina qabsoo keenyaaf ta’u isaa hubachun yammu dandda’amu, jijirama akkasi nammi qabsofi akeeka inni ittiin ka’e jaallatufi qabsaa’ufi waan barbaadufi jiruu irra akka inni olu gochuuni filannaa gara biraa qabaachu hin qabu, ta’udha qaba male. Inni gara biraammo isa yero baaye yaalamee qabsso keenya irratti dadhabbi guddaa fidu caalaa, kan inni guddinaani agarsiise hin jirre ammayu bifa geedarate ittu nudadhabsiisaa jirufi ammas essayu hin geenye sana fakkaata. Isa kanaani akkuma barame wallaansso keessaafi bakke finiinsani mo’umsaan bahu duwwatu egama. Kanaafi warri qabsoo kana gegesina jedhani hunddifi warri degera kenaniifi akka haalli toletti jijirama gara guddinaati nugeessu gubbaatti hojechufi jirutti hiikufi nama ofitti hawwachun galma ga’umssa wallaansso kanaafi murttessaadha.
3.Namooti lakkobsi isaani xiqqpo hin taane kaayo qabsso oromoofi duraa ka’ani amanamoota ta’ani baayeni waan hojetamaa jirufi kana ija abddiitiin ilaala jiru ta’u isaa baruni haalli gara fuula duraa abddachiisaa akka ta’e hubatani, keesumaa dhaaboliin yerofi hayoota lamaan gegefamaa jiraniifi kan isaan fakkaatanisi humnna bakkee jiru kana akkamittin deebisani akka ofitti dabaluuni hirrina karaa humnna namaa qabsso kana irra gahe deebisani guuttachu akka danda’anifi qabsichasi galma isa akka gahu akkamittin akka gochuu dandda’ani irratti hojii cimaa hojechutti akka ka’ani,
4.RAB hojii isheen hojetaa jirttu sabi ishe kan harra duwwaa atu hin ta’ini duri jalqabe fuulla diinaa duratti wareegama kafalaa turuu isheen waan hubatuufi abddi guddaa ishe irra qabaa, waan ishen gochaa jirttusi yero gabaabaa kana keessatti mirkanefataafi minyefataa jira ummati Oromo. Kanaafi ammalle keesumaa qabsso umata keenyaa dadhabee laafe jiru kanaafi gaheen meeshaa walqunamtti dhugaan ummataaf hojetuu guddaa ta’u isaa bartte jiruu ishe akka ta’utti akka itti fufttu jajabessun hiree kenya ta’u qaba.
5. Dhuma irratti mee arrabaafi haasaa diigaa wali irratti ofunnu kana gidduutti ijaajifnne si’uma tokkofille diina dhugaa ummata keenya mancaasaa jiru sana irraatti abaarsuma xinno tokko atuu hin darbbatini maalifi haasaa keenya finna, jenne of gaafanne beennaa laata? Dhugaadha suni akka diina keenya hin ajefnne beenna, garu yammu maqaa isaa ilaalaa bareesinu akka isa yaadannufi isa irrattisi bobba’un nurra jiru nutti yaadachisa, ofii keenya duwwaa irratti baressufi ofiifi wal abaaru duwwaa irratti atuu hin ta’in!!!
Bittaan Habashaa humnnaafi tokkumma keeyaan nurraa barbadaawaa!
Diigaan afaanifi jiruun walirratti oofnnufi goonu kuni diina keenya duwwaa gargaara!
Oromoon biya Oromiyaa irratti ni bilisaawaa!!!!!
Abdi Deqeeno July 1, 2012 at 6:38 pm
Dursee waa lama si yaadachiisuun fedha. Tokkoffaa, maqaa namaa akkuma abbichi barreessutti barreessi mallee jijjiirtee akka ofii kee feetetti hin barreessin. Kana gochuun wal kabajuu agarsiisa waan ta’eef atis nama sana biraa kabaja argatta – yaadaan walii galuu illee yoo dadhabdan jechuu kooti. Lammeesso, namni tokko yaadaa keetiin yoo morme, nama sana akka nama tokkootti ilaauu hin dhiisin. Waan ani barreesseef deebii kenite keessati “shame on you guys” jechuun kee dubbii badduu dha jechuu kooti. Ani akkuma nama tokkoottan barreessa malee nama biraa kan ani bikka bu’ee barreessuf hin qabu.
Eeyyee, Obbo Dawud edda Haayyu Duree ABO akka ta’uuf filatame ganni 10 darbeera. Haga ammaa barcuma sana irra turuu isaatiif badiin yoo jiraate kan dhaabichaati malee kan Obbo Dawud natti hin fakkaatu. Jiijjiiramuu qaba yoo ta’ee dhaabichi maaliif akka seeraa fi heera isaatti nama biraa bakka isaa hin buufne? Qabsaawota akka isaatiin filtame jechuun inni qabsaawota hunda caalee argame jechuu miti. Yeroo inni filatame sanatti miseensoti kora sabaa nama hunda caalaa isa irratti amantii qabaatanii turan jechuu dha. Kana akkamiin hubachuu akka dadhabde naaf hin galu.
“Nami gaafii yoo gaafatu gaafiisana deebisanii namuma gaafaatetti deebisuun tooftaa dadhabaa/dullomaa fi kan hududdubatti hafe.” jettee barreesite. Loojika kana eessaa akka fiddee hin beeku garuu dhugaa miti. “Dawud ABO geggeessuudhaaf dandeettii hin qabu” jechuu kee hin dagatin. Tokkooffaa jechi kee kun gaaffii hin turree, “declarative statement” dha malee. Jechaa kee kana irratti hundaaween, namni ati dandeettii Obo Dawud caalaa qaba jettee yaaddu sun eenyu? Ati nama sanaa? jedheen si gaafadhe. Gaaffii kootiif deebii kennuu hin feene yokaan hin dandeenye. Kun ati waan dubbatu caluma jettee tufta malee itti yaadde nama dubbattu akka hin taane agarsiisa. Dubbiin nama akkasii wajjin dubbatamu ammoo marii ilaa fi ilaamee irratti hundaawe ta’uu hin danda’u.
Booree July 2, 2012 at 6:58 am
Yaadi kee marti waan takka madaala hin kaasuu.
1- ” namni tokko yaadaa keetiin yoo morme, nama sana akka nama tokkootti ilaauu hin dhiisin. Waan ani barreesseef deebii kenite keessati “shame on you guys” jechuun kee dubbii badduu dha jechuu kooti”
You guys, kan jechisiisu namooni yada akka kan kee walfakkaataa qaban yaada/comment laatanii jiru. atilleen namoota asirratti galateefatte nii qabda. kanaaf jecha ati qofa kankee miti jechuu dha.
2- “Obbo Dawud edda Haayyu Duree ABO akka ta’uuf filatame ganni 10 darbeera. Haga ammaa barcuma sana irra turuu isaatiif badiin yoo jiraate kan dhaabichaati malee kan Obbo Dawud natti hin fakkaatu. Jiijjiiramuu qaba yoo ta’ee dhaabichi maaliif akka seeraa fi heera isaatti nama biraa bakka isaa hin buufne? ”
kana jechuun, dhaabota sana namoota akka kee nama jala deemaa Dhaaba kana keessatti hedduumatee jira. namoonni hedduun kayyootti amanaanii qulqullummaan QBO fuulduratti adeemsisuuf fedhii qaban yeroo dha gara yerootti qabsicha keessaa dhiibamanii bahanii jiru/bahaas jiru..isin namoota halli gaggessutoonni ABO dhaaba kana iotti gaggeessan ta’uufii didee dhaba keessa bhan maqaa xureessuun wal faarsuun moraa QBO huuqisaa jirtan. ammallee dhaabachuu hin dandeenye..
badii irratti badii dogoggoratti gogoggora irra dedeebi’uun Oromoon qabsootti aka hin hirmaanne namoonni xiqoon wal filrtanii olola gaggeessuun hawaasa oromoo gaga’aa jirtan..
Abdi Deqeeno July 2, 2012 at 3:19 pm
Yaa Booree keenya,
Booreen natti hin hafin jettee deddeebitee katabaa jiraanchuun kee ifatti beekama. Garuu, kijiba deddeebisanii barreessuun beekaa nama hin godhuu, qalbifadhu. “atilleen namoota asirratti galateefatte ni qabda” jette. Kun kijiba adii akka ta’e namuu ni hubata. Ani nama tokko illee farfadhee hin beeku. “Naboota akka kee nama jala deemaa dhaaba kana keessatti heddumaatee jira” jechuun kee ammoo kijiba biroo ati; ani miseensa dhaaba kamiiyyuu miti. Namtokkeedhuma ta’een dhaabota waan gaarii hojjataa jiran jedhee amanu deggera hamma humna kootti. Kun jechuun ani dhaba kamiyyii keessatti mirga filuu fi filatamuu hin qabu. Kanaaf Obbo Dawud barcuma HD ABO irra jiraachuu isaatiif ani na komachuun kee karaa miti.
Barreeffamni kee kan ifatti mul’isu ati jarreen “Jijjiirama” jedhanii ABO irraa fotoqanii of dhaaban keessaa tokko ta’uu keeti. Namni akka keetii dhaaba kamiinuu qeequu hin danda’u. Jijjiiramni kee bikka meeqatti akkanni cabee lakooftee bira geesseetaa laata. Kemaaliin Amaaratti galchitan. Amma ammoo hogganoota ABO duraanii jala dhokatanii mataa of qabachuu yaalaa jirtu. Gonkuma hin milkooftani bari. Balleessaa hojjatani amantanii gara moora qabsoo dhugaatti utuu deebitanii isiniif wayya.
Booree July 3, 2012 at 7:24 am
ani miseensa dhaaba kamiiyyuu miti jatta. garuu akkaataan kee marti qamaa shanee ta’uukee muli’isa.
It walks like a duck, it quaks like a duck, It looks like a duck, It must be a duck!!!
nama yaada isinirra adda ta’e kaasu mara maqaa xureessuu, garee/dhaaba tokkotti ramaduun irratti ololuu/ololchisuu, qabsoo gaggeessaa jirra jachuun of sobuu..amala keessan. Kan sirra mula’atus
fakkeenyaaf yaadni itti aanu kun eenyu ta’uu kee guututti muli’sa. “ati jarreen “Jijjiirama” jedhanii ABO irraa fotoqanii of dhaaban keessaa tokko ta’uu keeti. Namni akka keetii dhaaba kamiinuu qeequu hin danda’u. Jijjiiramni kee bikka meeqatti akkanni cabee lakooftee bira geesseetaa laata. Kemaaliin Amaaratti galchitan. Amma ammoo hogganoota ABO duraanii jala dhokatanii mataa of qabachuu yaalaa jirtu”.
jijjiramni moora QBO keessatti ammas taanan barbaachisaa dha. Jijjiramni dhaabni jedhamu dadhabina mataa isaattiin dadhabuun saa siihii fi garee kee/Shanee biratti akka jabeenyatti isinitti mulatuu dandaa’a ta’a. haata’u malee dhugaan jiru kanarra fagoo dha. Akanaumatti bara dhuufee darbu ta’aa olola/ololchisaa.
toftaan itti dadhabina dhokfatan tokko nama gara dhaba birootti ramaduu dha jattanii yaaddu..
bar Gudduna oromoof yoo ta’e gaafiin QBO eessaa ka’ee eessa jira?! keesuma bara 1991 kaase haga harratti maaltu deema jira kan jedhu wal haagafannu…
atii fi fakkaattonni kee bara dhufee dabru mara geengoo gad deeb’iumma keessatti nuhambisuuf caraaqxan!…
Enogh is enough!
Abdi Deqeeno July 3, 2012 at 8:37 am
Dhiisii sitti ha hafuu jannaan didde. Egaa itti ha fufunuu jabaadhu.
Dhuguma jijjiiramni yoomuu barbaachisaa dha. Jijjiiramni garuu walii lama. Jijjiiramni dhugaa irratti hundaawee gara jabinaatti adeemsisu jira. Kan ammoo kijibaa irratti dhaabatee dadhabiinsaa fi laafinatti tarkaanfachiisu jira. Qabsoon Bilisummaa Oromoo jijjiirama isa kam akka barbaaddu qabsaawoti dhugaa ni beekan. Jijjiiramni atiif hiriyoonni kee bara 2008 dhaabbattan garuu jalqabumaa kaasee Oromoo diiguuf kan xiyyeeffate ture. Dhugaan huqqattus hin duutu akkuma jedhamu, dhugaan ifati yeroo baatu hawwiin keessan ni fashaalte, isinis ofumaa keessanii wal diigdani.
Har’a qabsaawota kaayyoo bilisumma sabaatiif dhaabatan mara biratti dhugaan ifatti muldhatu tokko jirti: Bara 1991 as ABO kan takaale jarreen qabsoo hidhannoo dhiifnee, heera Itoophiyaa fudhannee, Wayaneetti araaramne, biyyatti ha gallu warra jedhaa turani fi jarreen jijjiirama fidna jedhanii ABO diiguu yaalani dha. Kanneen Wayanee waliin araaramuu yaalanii turan bara 2000 keessa yeroo dhaaf Shanee gowwoomsanii waan turaniif ABOn bikka lamatti akka cabu godhuu danda’an. Kanneen jijjirama fidna jedhanii yaalan ammoo diigama guddoo fiduu isaanii atuu na caalaa beekta.
Egaa isin jarreen lamaan kana har’a maqaa Marii jedhu fudhattanii ummata afaanfajeessuu yaalaa kan jirtan. Ammas badii takka irraa gara badii birootti tarkaanfattu malee hin milkooftani. Moora QBO keessatti araarri ni bu’a, jijjiiramni dhugaas ni argama. Maqaa jijjiramaatiin garuu Oromoo diinaaf jilbeenfachiisuun gonkuma hin danda’amu. Abdii kutadhu.
Booree July 4, 2012 at 10:27 am
Beeki warra afaanii fi gurra cuqqaallatee “hogganaa” jala yaa’u waliin dhimma saba ofii mari’achuun ni cima. namoonni akka kee ijji sanii “hogganaa” malee dhugaa jirtu arguu gurri keessaan qeeqaa fi dhugaa jirtu dhaga’yuu hin dadeessan/hin barbaaddan.
It is very difficult to discuss with people who are like bluffed horse!. They can not see what is on the other side.
Henchmen are cancers to democracy and transformation!. That is why Meles zenawi , the dictator in chief is keeping his grip on power. the bluffed horse and the henchmen are keeping him in power!
by the same token, u guys trying to repeat the same mistake here in QBO and biyya Oromo!
Galangalee Sabaa. July 4, 2012 at 3:56 pm
” Dandeetiin” essa jira ? Kunnoo namni nam- tokko falmee amansiisu hin hin dandeeny yeroo dandeetii nama biraa ” tufatuu” nama ajaa`iba!. ” yaa afaanii jette funyaan gadi illaalte” . Waan dubbanu utuu baree tajjabii kana keesa hin seenu. Beekan waan dubbatu beeka, wallaalan waan beeku dubbata jedhe Buttaa Alangoo.
Abdi Deqeeno July 4, 2012 at 7:30 pm
Ati if iyyuu hin beektu, garu ani nama attamii akkan ta’e ibsuu yaalta. Afaan tokko dubbattee yaada kee ibsachuu hin dandeessuu, garuu dhimma saba irrattan mariyadha jettee if irraa himta. Kan kee ajaa’iba jedhanii si bira taruu malee daandiitti si deebisuun kan danda’amtu hin fakkaattu. Afaan Oromootiin waa dubbachuu jalqabdee walakaa gaafa geessu Ingiliffaatti jijjiirratta. Namootni akka keetii sammuun isaanii wullee dhaan wali hin caalu — keessa homtuu hin jiru jechuu dha. Ingiliffa waan dubbatteef namni akka beekaatti na ilaala jettee yaadda. Kun hiri’na sammuu hiriyaa hinqabne ta’ee natti mul’dhata. Nama waan ati barreessitu dubisuuf kabaja qabda yoo taate fuula duratti afaanuma takkaan barreessi. Afaan waliin makuun beeka si hin taasisu.
Amantus, amanuu baattus ani haga ammaatti hoggana caluma jedhee faana bu’uu fedhu hin arganne — yoon hoggana “hunda-beekaa, hunda-argaa fi hunda-danda’aa” argadhe garuu tolee jedhee faana bu’uuf qophaawaa dha. Haga hoggana “hunda-beekaa” argadhutti garuu, hogganni koo kanneen, Obbo Daawud Ibsaa, Obbo Dhugaasaa Bakakkoo fi Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa fakkaatanii dha. Isaan keesa eenyu illee kan waa hunda beeku hin jiru; kan balleessa hin hojjanne hin jiru. Garuu kaayyoo dhaabni isaanii dhaabatuuf bikkaan gahuuf haga beekumsa saanii fi dandeettii isaanii waan danda’an gumaachaa jiru. Sabni Oromo, haga hoggana “hunda-beeka” ati yaadaa qabdu sana argatutti hogganootuma ani kana olitti maqaa dhaye sana faana bu’uu filata jedheen amana.
Atiif hiriyoonni kee kutattanii kan kaataniif hoggana ABO jabeessuu yoo kaan fooyyesuudhaaf miti. Yoo isiniif danda’ame ABO dhabamsiiftanii dhaaba Itiyophiyaa demokraatessuuf dhaabatu, kan isiniin hooganamu ijaaruudha hawwiin keessan. Maqaa mariitiin, hoggana sababa godhatanii QBO daandii isaa irraa miliqsuu dha hawwiin keessan. Hawwiin keessan fixaan baha otuu ta’e ABOn isiniin hogganamu Ginbot-7 fi EPRP waliin adda hin ta’u. Abjootaa jirtu, dammaqaa isin gayaa.
Haga yeroo biraa walitti deebinutti nagaan jiraadhu.